တရုတ်နိုင်ငံက ၈ နှစ်အတွင်း ကျေးလက်နေ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ ၉၉ သန်းနီးပါးအား ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမှ လွတ်မြောက်အောင် ဆွဲတင်နိုင်ခဲ့ဟု စက္ကူဖြူစာတမ်းတွင် ဖော်ပြ - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း စီချွမ်းပြည်နယ် Beichuan ကောင်တီ၌ ဒေသထုတ်ကုန်များအား တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ရောင်းချနေမှုကို ကြည့်ရှုနေသည့် ကလေးငယ်တစ်ဦးအား တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ပေကျင်း ၊ ဩဂုတ် ၁၂ ရက်(ဆင်ဟွာ)
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းအထိ တရုတ်နိုင်ငံက လက်ရှိဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမျဉ်းအောက် ရှိနေသော ကျေးလက်နေပြည်သူ ၉၈ ဒသမ ၉၉ သန်းအား ၈ နှစ်တာ ကြိုးပမ်းအားထုတ်ပြီးသည့်နောက် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမှ လွတ်မြောက်အောင် ဆွဲတင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း စက္ကူဖြူစာတမ်းအရ သိရသည်။“အားလုံးက လေးစားရသော အတော်အတန် ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု : တရုတ်နိုင်ငံ၏ လူ့အခွင့်အရေးများတွင် အောင်မြင်ခဲ့သည့် နောက်ထပ် သမိုင်းမှတ်တိုင်” ဟူသောခေါင်းစဉ်ဖြင့် စက္ကူဖြူစာတမ်းကို နိုင်ငံတော်ကောင်စီ သတင်းပြန်ကြားရေးရုံးက ယနေ့ ဩဂုတ် ၁၂ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ (Xinhua)
China lifts nearly 99 mln rural poor out of poverty in 8 yrs: white paper
BEIJING, Aug. 12 (Xinhua) — By the end of 2020, China had lifted all the 98.99 million rural residents living below the current poverty line out of poverty after eight years of efforts, according toawhite paper.
Titled “Moderate Prosperity in All Respects: Another Milestone Achieved in China’s Human Rights,” the white paper was released by the State Council Information Office on Thursday. Enditem
Photo -A child watchesalivestreamer selling local products in Beichuan County, southwest China’s Sichuan Province, Nov. 14, 2020. (Xinhua/Jiang Hongjing)
အိန္ဒိယနိုင်ငံက နိုင်ငံသားများအား အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှ ချက်ချင်းထွက်ခွာရန် အကြံပြုထား
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ၌ တိုက်ပွဲများကြောင့် ထွက်ပြေးရသော ပြည်သူ ထောင်ပေါင်းများစွာရှိဟု ကုလသမဂ္ဂပြော